Ny vaovao firaka karazana fiarovana tranony dia tsy hasehonao - China Shandong Chen Lk
Action:: taratra fiarovana
Lead mitovy :: 0.35mmpb
famaritana :: L, M, S
HA08 fiarovana tranony zipo (tokana tavanao tsy misy tanany)
Non-hasehonao Taratra fiarovana zipo / hitarika akanjo modely: HA08
Izany no tena ampiasaina ny fiarovana ny X-ray, ary ny mpampiasa dia afaka mifidy ny fiarovana andiana samy hafa sy ny fepetra arahana masontsivana araka ny ilaina. (Ny fiarovana ny Gamma taratra amin'ny ankapobeny MMPB 0,5).
Ny toerana misy anao haben'ny akanjo ity dia fitaovana habeny. Raha misy toe-javatra hafa, dia miovaova be ny vidiny, azafady fakan-kevitra manokana!
Radioprotection zipo anti-mitarika akanjo fiarovana vaovao iraisam-pirenena mitarika fonony
Amin'izao fotoana izao, ny tena ultralight, Ultra-manify sy malemy fiarovana Ultra-fitaovana eo amin'izao tontolo izao; Raha oharina amin'ny dehibe toy izany koa firaka fitafiana, ny havany lanjan'ny 25 ka hatramin'ny 30 isan-jato dia azo nihena.
- ray aman fiarovana fitoriana atao dia manana fananana tsara fiarovana
Ny mpitarika dia tena fizarana fanamiana ara-dalàna sy ny fampiasana firaka, tsy attenuated. Omeo 0,35 / 0.5mmPb loha laharana mitovy; Manaova-mahatohitra, mora-to-madio ambonin'ny fitaovana mba hiarovana ny fampiasam-bola ho any amin'ny ambony indrindra araka;
Ny famolavolana ny rafitra vaovao ny ray aman fiarovana overskirt anti-mitarika ady sy teny hotsaraina
Izany dia vita tamin'ny multi-sosona fitaovana, miaraka amin'ny famolavolana rafitra matihanina olombelona, ​​izay mahatonga anao hahazo aina.
Fametrahana mazava tsara dingana orinasa mpamokatra entana
Tsara tarehy hafa: tena nitandrina, mateza, dia aoka ianao mampiasa ny sisa toky;
Ray akanjo fiarovana ho an'ny fiarovana akanjo
Ny fomba dia tany am-boalohany sy ny isan-karazany dia feno
Manan-karena amin'ny habeny, na inona na inona ianao matavy mahia, lava sy fohy, foana ny sahaza ho anao, ho tahaka ny Tailor ho anareo; Am-polony fomba, manan-karena loko azo voafidy, hanambara ampahibemaso ny toetra tanteraka.
Previous: Chen ny taratra Lu-porofo tsara akanjo manana tokan-niandany fiarovana fampisehoana
Manaraka: Lu vaovao Chen miaro mitarika fingotra Cap azo namboarina ho hafa mitovy
China Hot Sale Taratra Akanjon'ilay
Shinoa X-Ray Protective Akanjon'ilay
hopitaly Ampiasao fingotra tariho Akanjon'ilay
Mampiasa hopitaly X-Ray Akanjon'ilay
Import Material Protective Akanjon'ilay
New Protective Short Akanjon'ilay
New Split Protective tranony Akanjon'ilay
New karazana Protective Akanjon'ilay
Fiarovana X-ray mitarika Akanjon'ilay
Hiarovana: Medical Akanjon'ilay
Fiarovana Akanjon'ilay Amin'ny Import Material
Fiarovana X-Ray Akanjon'ilay
Taratra Lead Akanjon'ilay
Soft Protective Akanjon'ilay
Soft Split Protective Akanjon'ilay
Split Protective Akanjon'ilay Amin'ny Import Material
Super Soft Protective Short Akanjon'ilay
Faran'izay Soft Split Protective Akanjon'ilay
Lead X-Ray Akanjon'ilay
X-Ray Protective Short Akanjon'ilay
Ray X-Protective Akanjon'ilay
Chen ny taratra Lu-manana porofo akanjo tsara S ...